बाटैमा मोटरसाइकल बिग्रियो ? चिन्ता नमान्नुस्
कतै जाँदा तपाईंको दुईं पांग्रे सवारी साधन बाटोमै बिग्रिएर डो¥याउँदै मर्मत केन्द्रसम्म लैजानु पर्ने भयो वा व्यस्त समयका कारण आफ्नो साधन मर्मत केन्द्रसम्म लैजान सकिरहनु भएको छैन । धन्दा नमान्नुस्, तपाईंले त्यो सेवा अब सहजै पाउनु हुन्छ, त्यो पनि गुण...
पिरेलीले बनायो टायर आकारको ब्लुटुथ स्पिकर
रेसिङ शौखिनहरुका लागि टायर आकारको ब्लुटुथ स्पिकरको निर्माण गरिएको छ । इटालीको टायर निर्माता कम्पनी पिरेलीले निर्माण गरेको सो स्पिकरको नाम पी जिरो साउन्ड राखिएको छ । पिरेलीले इटालीस्थित रेसिङ मोटरसाइकल थिममा आधारित स्पिकर सिष्टम बनाउने कम्पनी आईजुस्ट...
काठमाडौं – डिजिटल एजेन्सी क्याटमान्डुले नेपालमै पहिलो पटक स्क्रम मिटअप सम्पन्न गरेको छ । सो मिटअपमा एजाइल कोच आनन्द तिवारीले स्क्रमका वारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गरेका थिए । तिवारी करिब १८ बर्षदेखि अमेरिकामा रहेर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कार्य गरि...
आउदैछ यस्तो फ्लाइङ ट्याक्सी, जसलाई एयरपोर्ट चाहिदैन
ब्रिटिश इन्जिन निर्माता कम्पनी रोल्स रोयसले एक हवाई इलेक्ट्रिक ट्याक्सी बनाउने घोषणा गरेको छ । सो उड्ने ट्याक्सी कुनै पनि स्थानमा नरोकिएर हावामै उड्न र बस्न सक्ने छ । हावामै रोकिएको समयमा मानिसहरु चढ्न र ओर्लिन सक्ने छन् । यद्यपि सो उड्ने ट्याक्सी ब...
नर्वेमा इलेक्ट्रिक प्लेन परीक्षण, एभिएसन क्षेत्रमा क्रान्ति आउने
नर्वेमा सोमबार एक दुई सिटे इलेक्ट्रिक प्लेन परीक्षण गरिएको छ । सो इलेक्ट्रिक प्लेनको नाम अल्फा इलेक्ट्रो जी २ राखिएको छ । ओस्लो विमानस्थलबाट उडान भरेको सो प्लेनमा दुई जना नर्वेजियन ट्रान्सपोर्ट अधिकारी सवार थिए । ब्याट्रीबाट सञ्चालित सो प्लेन केही मि...
नेपाल टेलिकमले ल्यायो परिमार्जित एप, प्याकेज खरिद गर्न र अन्य धेरै कार्य गर्न सकिने
काठमाडौं – नेपाल टेलिकमले आफ्नो मोबाइल एप ‘नेपाल टेलिकम’ (Nepal Telecom) लाई परिमार्जन गरी नयाँ रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ एपमार्फत नेपाल टेलिकमका जीएसएम, सीडीएमए, पीएसटीएन र एडीएसएल लगायतका सेवाहरुको वारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो एपमा ल...
स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा अब एसएमएसबाटै
काठमाडौं – अब सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षामा पास भए/नभएको र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भए/नभएको जानकारी एसएमएसबाटै पाउन सकिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले एसएमएस गरेर नतिजा र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भए/नभएको थाहा पाउने सक...
के हो बाइक र कारमा हुने एबीएस (ABS) सिष्टम ? कसरी काम गर्छ ?
वर्तमान अवस्थामा बाइक र कार निर्माता कम्पनीले विभिन्न सेफ्टी फिचर्समा ध्यान दिन थालेका छन् । यसैका कारण हाल लगभग सबै बाइक र कारमा एबीएस अर्थात एन्टी लक ब्रेकिङ सिष्टम (ABS) उपलब्ध गराउन थालिएको छ । एबीएसको काम सवारी साधनको सुरक्षित ड्राइभिङ सुनिश्चित...
लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न सक्ने स्मार्ट प्रिन्टर
काठमाडौं – नेपालमा अत्याधुनिक आईडी तथा स्मार्ट कार्ड प्रिन्टर भित्रिएको छ । उक्त प्रिन्टरबाट सवारी अनुमति पत्र अर्थात लाइसेन्स समेत प्रिन्ट गर्न सकिने छ । अमेरिकाको जेब्रा कम्पनीले पहिलो पटक नेपालमा सेवा विस्तार गरेको छ । मालिका इन्कर्पोरेटले नेपाली...
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रमा डिजिटल पार्किङ सर्भिस शुरु गर्ने योजना बनाएको छ । योजना अनुसार कार्य भएमा आगामी ४ महिना भित्र सो सेवा प्रारम्भ हुनेछ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसका लागि अध्ययन सम्पन्न गरेको र यसका लाग...
अब सेल्फी स्टिक होइन गिकोस्टिक
सोसल मिडियाका लागि तस्बिर खिचेर पोस्ट गर्नका लागि हामी सेल्फी स्टिकको प्रयोग गर्छौ । यद्यपि यसलाई जहासुकै बोकेर जान समस्या हुन्छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी बामडिजाइन कम्पनीले गिकोस्टिक तयार गरेको छ । गिकोस्टिकलाई खल्तीमा बोकेर जहा पनि लैजान सकिन्छ ।...
नेपाली बजारमा भित्रियो संसारकै सबैभन्दा पातलो टिभी
काठमाडौं — संसारकै सबैभन्दा पातलो टिभी ‘वालपेर टिभी’ नेपाली बजारमा भित्रिएको छ । यो टिभीलाई केएलदुगड समूह अन्तर्गत स्मार्ट अप्लाईन्सेस कम्पनीको स्काईवर्थ ब्राण्डले नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । स्काईवर्थको वल्र्डकप अफर स्किम नेपालभर संचालन भईरहे...
अब हुने छैन मोटरसाइकल दुर्घटना, बोसले ल्यायो नयाँ प्रविधि (हेर्नुस् भिडियो)
जर्मन कम्पनी बोसले बाइकलाई लड्नबाट बचाउनका लागि नयाँ प्रविधिको रुपमा स्पेस टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने भएको छ । यसका लागि आवश्यक डिभाइस बोसले निर्माण गरेको छ । हाल गाडीहरुमा प्रयोग गरिने एयरब्याग प्रविधि जस्तै यसले कार्य गर्नेछ । गाडीहरुमा एयरब्याग फुक...
दिल्लीका सबै अटो र क्याबमा क्युआर कोड अनिवार्य
अब भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीका सबै अटो र क्याबहरुमा क्युआर कोड अनिवार्य रुपमा डिस्प्ले गर्नु पर्ने भएको छ । भारतको यातायात विभागले गत महिना गरेको निर्णयलाई अर्को महिनादेखि लागू गर्ने जनाएको छ । कुनै अटो, ट्याक्सी वा अन्य सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने या...